नेपालमा पनि श’वदाह गृहमा श’वको लाइन, मूलगेट बाहिरै बज्यो एकोहोरो श’ङ्ख ! - News 88 Post
May 1, 2021 N88LeaveaComment on नेपालमा पनि श’वदाह गृहमा श’वको लाइन, मूलगेट बाहिरै बज्यो एकोहोरो श’ङ्ख !
काठमाडाैं । पशुपतिको विद्युती’य श’व दा’हगृह । केही बेरअघिसम्म स’न्नाटा थियो । मध्याह्न .१२ बजे सा’इरन बजाउँदै नेपाली सेनाको गाडी आइपुग्यो । अनि एकाएक को’लाहल सुरु भयो । सेनाको टोलीले पालैपालो गाडीबाट पहेँलो ‘डे’ड ब’डी ब्याग’ मा राखिएका दुइटा श’व झि’केर गेट नजिकै ल्यायाे ।‘गेट भित्रप्रवेश नगर्नुहोला’, नेपाली सेनाका एक ज’वानले अनुरोध गरे । उनको अनुरोधले भित्र प्रवेश गर्न लागेकी एक महिलाको पाइला गेटबाहिरै रो’कियो। ‘बा, किन छोडेर गएको ? एक पटक मुख हे’र्न पाए नि हुन्थो’, ब’राम्बार उनी आ’लाप गर्दै थिइन् ।
केहीबेरपछि ती युवा खुल्दै गए । उनी दाङ तुलसीपुर–१७ का पवन डाँगी रहेछन् । ६६ वर्षीय बुबा (केशरबहादुर डाँगी) प’शुपतिको दर्शन गर्न दाङदेखि आएको उनले सुनाए । केशरबहादुर द’मको नियमित औ’षधि से’वन गर्नुपर्ने दी’र्घरोगी थिए। ‘नसोचेको घ’टना भयो ।बुबा पशुपतिमा लाख बत्ती बाल्न र दर्शन गर्न आउनुभएको थियो । आएकै दिन को’भिडले स’मात्यो’, उनी भन्छन्, ‘लाख बत्ती बा’ल्ने बा’को सपना पूरा भएन।’७ वैशाखमा जहाजबाट काठमाडौं ओर्लिएका केशरबहादुरलाई झ’रेको केही घण्टामै सा’स फे’र्न गाह्रो भएछ ।
‘घरबाट फोन आइरहन्छ । मलाई नै कु’रेर बस्नु भएको छ । म पुगेपछि अलि शा’न्त होला’, उनी आफैँलाई भने बुझाउने कोसिस गर्छन् । भित्र बुबाको श’व ज’लिरहेको थियो । गेट बाहिर उनको मन ज’लिरहेको प्र’तीत हुन्थ्यो । न त उनले दा’गबत्ती नै दिन पाए ।घाटनजिकै गएर १ सय ५० रुपैयाँमा माटोको भाडोमा रहेको जौं, तिल र फूल किने उनले । ‘बुबालाई त लान सकिएन । घरमा देखाउन एउटा फोटो छ । अ’स्तु वा ख’रानी त देलान् नि, यही माटोको भाडोमा लान पाइएला कि’, उनी भन्छन्, ‘कसैले पनि हे’ल्चेक्याइँ नगर्नुहोस् ।
केयर नगर्दाको परिणाम ठूलो भोग्नुपर्छ ।’कोरोना भाइरस (को’भिड– १९) को संक्रमणबाट मृ’त्यु भएकाहरूको श’व नेपाली सेनाले पशुपतिस्थित विद्युतीय श’व दा’हगृहमा ज’लाउँदै आएको छ । कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै मृ’त्यु हुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ ।विद्युतीय श’वदाहगृहमा श’व ज’लाउन पालो पर्खनुपर्ने अवस्था छ । ‘केही दिनदेखि संख्या बढेको छ । मंगलबार ८ वटा, बुधबार १३ वटा र बिहीबार १८ वटा श’व व्यवस्थापन गरिएको छ’, पशुपति विकास कोषका सदस्य सचीव प्रदीप ढकालले भने, ‘को’भिडको लागि विद्युतीय श’व दा’हगृह मात्र प्रयोग हुन्छ ।
सेना र कोषका कर्मचारीको समन्वयमा श’वको व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ ।’कोभिड १९ सं’कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)को पत्र आएपछि नेपाली सेनाले श’व व्यवस्थापनको प्रकृया अगाडि बढाउने गरेको छ । ‘अस्पतालले सीसीएमसीलाई पठाउँछ ।सीसीएमसीबाट पत्र आएपछि सेनाले व्यवस्थापन गर्ने हो’।सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले भने, ‘पोजिटिभ स’र्टिफिकेट, अस्पतालले दिएको मृ’त्युको स’र्टिफिकेट पाएपछि परिवारको समहमतितमा व्यवस्थापन गर्छाैं ।’उपत्यकामा वि’द्युतीय श’व दा’हगृह एउटा मात्र भएकाले लाइन बस्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । ‘राति पनि श’व व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ’, उनले भने, ‘वि’द्युतीय श’व दा’हगृह एउटा मात्र भएकाले ला’इन बस्नुपर्ने अवस्था छ ।’ शिलापत्रबाट
महिनावारी भएको कति दिन पछि गर्भ बस्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने कुरा
केपी ओलीलाई भित्तामा पुर्याउने गरी आज यस्तो घोषणा गर्दै माधव नेपाल